Cgba ọsọ ọsọ ọsọ | Zuru okè rịgoro Systems
Debanye aha ngwaọrụ gị
Drivegba ọsọ ọsọ
Chọta onye na-ere ahịa
Banyere Nchekwa onwe
Gba ọsọ ọsọ
Ọrụ & Nyocha
Asọmpi ọsọ ọsọ
Oge ọzụzụ na PD®
Mụ na onye egwuregwu PD®, Kai Lightner Ọkachamara ndị egwuregwu na ndị ntorobịa zuru oke Kai Lightner na-enye anyị ohere ịbanye n'ime usoro ọzụzụ ya kwa ụbọchị. Kai na-agbaji usoro agbata ya iji wulite ike na ntachi obi iji kwadebe maka ọrụ ịrịgo siri ike. Kai banyere asọmpi mbụ ya mgbe ọ dị afọ isii, ọ kwụsịghị ịrị ugwu. Oge iri na abụọ…
Ghọ onye Olimpik
Site: Sean McColl, Olympic Rock Climber (CAN) Achọrọ m iru eru na ịsọ mpi n'egwuregwu Olympic tupu m cheta, echetara m na m tetara n'ụtụtụ ma na-ele Egwuregwu Olympic kwa ụbọchị na ezinụlọ m. A zụlitere m n'egwuregwu egwuregwu ma hụ m ka m na-arịgo mgbe m dị afọ 10.…
Ajụjụ na Azịza na Kai Lightner
Kedu oge na kedu ka ị malitere ịrị ugwu? Agbanyeghị na amalitere m ịrị mgbatị ahụ ruo mgbe m gbara afọ isii, anọgidere m na nsogbu maka ịrị ihe nke ọma tupu mgbe ahụ. Site na ịrị n’elu ọnụ ụzọ nwa ọhụrụ n’ụlọ anyị (tupu m ga - aga ije) iri nri ehihie n’elu bọọlụ basketball n’okporo ụzọ anyị, nne m…
Ajụjụ na A na Sean McColl
Kedu oge na kedu ka ị malitere ịrị ugwu? Amalitere m ịrị ugwu na 1997 na ezinụlọ m. Lọ ịgba egwu tennis anyị emechiela anyị chọrọ ịchọta ihe anyị ga-eme dịka ezinụlọ. Anyị zụtara otu afọ maka ime mgbatị ahụ, m hụrụ ya n'anya ozugbo. Kedu ihe na - akpali gị ịrịgo na gịnị kpatara…
Ajụjụ na John Brosler
Kedu oge na kedu ka ị malitere ịrị ugwu? Amalitere m ịrị ugwu n'ogige oge okpomọkụ mgbe m dị obere ma sonye na Team Texas mgbe m dị afọ 10. Amalitere m sọọ mpi n’afọ 2009 mgbe m dị afọ iri na abụọ. Amalitere m ịsọ mpi na mbụ n'ihi na onye nchịkwa m…
Nkwado na 2020: Asọmpi Polish ọsọ
Site na mgbochi mmachi na-ebelata n'ọtụtụ akụkụ ụwa, Poland na nso nso a asọmpi asọmpi ọsọ ọsọ mpaghara. N'ime otu afọ nke enweghị ohere dị egwu maka ndị na-eme egwuregwu ịsọ mpi, anyị nwere obi ụtọ ịkwado ihe omume n'ụlọ Onye Ọchịchị World Speed ​​Speed ​​Climber na Olympian, Aleksandra Mirosław. Na Saturday, August 29, nnukwu…
Gbaji Mmetụta nke IFSC Championship Pan-Ams na Afọ Olimpik
Izu a, site na Febrụwarị 24 – Machị. 1, kara akara International Federation of Sport Climbing (IFSC) Pan-American Championship na ịrịgo mgbatị izipu Otu na Los Angeles, California. Ndị mmeri ga-agbapụ oge 2020 Sport Climbing, asọmpi ga-ekpebi oke ikpeazụ nke ndị egwuregwu Pan-American ruru eru ịsọ asọmpi Olympic na Tokyo n'oge okpomọkụ a. Naanị…
IFSC Speed ​​Speed ​​na Lead Ego World Cup - Wujiang, China 2018
Na IFSC na-agbago World Cup Championship na Wujiang, China, Anouck Jaubert nke France weghaara aha oge maka ịrị elu ụmụ nwanyị mgbe oge kachasị ọsọ bụ mmemme Juliia Kaplina nke ọsọ 7.650. Jaubert kari onye otu ibe ya bu Aurela Sarisson nke France na uzo mbu, nyere Sari Agustina nke Indonesia ihe oma a
Egwuregwu Egwuregwu ndị ntorobịa nke 2018 Recap
Oge mbụ ndị ntorobịa Olympia nke Sport Climbing kwubiri na Games Summer Olympic Olympic (YOG) na Buenos Aires, Argentina na October 10. Egwuregwu Egwuregwu gosipụtara ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwanyị 42 na-anọchite anya mba 25. Ala nke ndị na-eme egwuregwu nwere nnukwu 16 na 17 afọ Bouldering, Speed ​​and Lead athlete located for the first…
Asọmpi Irigo Ulo ụwa 2018 Recap
Mgbe ụbọchị iri nke asọmpi n'etiti mmadụ isii n'ime ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-egwu egwuregwu kachasị elu, ngwụcha egwuregwu jikọtara na njedebe n'etiti ndị na-eme egwuregwu na-eche ihu na Bouldering, Lead, na Speed ​​Climbing showdown maka aha ụwa jikọtara. Womenmụ nwanyị isii ikpeazụ a na-aga n'isi na isi ọsọ ọsọ na mkpochasị ihe nkwado, Miho Nonaka nke…
Akwụkwọ ntuziaka Onye ọrụ
Nduzi Ngwaahịa zuru oke
Nọrọ ruo ụbọchị
© 2021 Ngosiputa Ngwa igwe. Ikike niile echekwabara.